Home / मनोरन्जन / एक सुपरमोडल हुन् अनिल कपुरकी श्रीमती, डेटमा जाँदा खाना देखि सारा खर्च आफै उठाउने गर्थिन ! यस्तो छ अनिल कपुरको प्रेम कथा
एक सुपरमोडल हुन् अनिल कपुरकी श्रीमती, डेटमा जाँदा खाना देखि सारा खर्च आफै उठाउने गर्थिन ! यस्तो छ अनिल कपुरको प्रेम कथा 0
बलिउडमा धेरै स्टारको बीच प्रेमसम्बन्ध पछि बिहेसम्म भएको छ। तर केहि यस्ता नायक र नायिका छन् जसले आफ्नो जीवनसाथी फिल्मी जगत भन्दा बाहिरबाट छानेका छन्। एक झक्कास नायक अनिल कपूरको श्रीमती पनि हुन् जो एक समय अनिल कपुरको पुरा खर्च उठाउने गर्थिन।
अनिल कपूरले एक मोडलसँग विबाह गरेका हुन जसको नाम सुनिता हो। जब अनिलले सुनितासँग विवाहको संघर्ष गरिरहेको थिए। यसै समय अनिललाई सुनितासँग प्रेम बस्यो। यस्तो समयमा अनिललाई सुनिता पाउने चाहाना बढ्यो। तर अनिलसँग सुनितासम्म पुग्ने कुनै विकल्प थिएन।
पछि अनिल कपुरले साथीको मद्दतबाट मोडल सुनिताको नम्बर पाए। त्यसपछि कुराकानी अघि बढेको हो। अनिल सुनिताको आवाजको दिवाना भएका थिए। तर अहिले कमै मानिसलाई थाहाँ होला ती संघर्षको दिनहरुमा अनिल कपुरसँग ट्याक्सीको भाडा दिने पनि पैसा पनि थिएन त्यस बखत सुनिताले पुरा खर्च उठाउने गर्थिन।
अनिलले एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए कि एकपटक जब सुनितासँग फोनमा कुरा हुदै थियो तब उनीहरुको पहिलो पटक भेट्ने कुरा भयो र दुवै तयार पनि भए । पहिलो पटक भेट्न आउने बेला सुनिताले सोधिन कति बजे आईपुग्छौ तब उनले २ घण्टामा आईपुग्छु भनेका थिए। सुनिताले यति धेरै समय लगाउनुको कारण सोधिन तब अनिलले आफ्नो आर्थिक स्थितिको बारे बताउदै भने बसमा आउँदा धेरै बेर लाग्यो ट्याक्सीमा चड्ने पैसा हुदैन । उनले सब कुरा सुनेपछि भनिन,’तपाई ट्याक्सी चढेर मात्र आउनुहोस म यहाँ आएपछि पैसा दिनेछु।’
यस भेट पछि अनिल र सुनितामा प्रेम बस्न थाल्यो र दुवै संग-सँगै सार्वजनिक यातयातमा घुम्न थाले। अनिलले पछि साथीको कुरा सुनेर दुई पटक विवाहको लागि अस्विकार गरे। तर पछि सन् १९८४ मा दुवै बैबाहिक बन्धनममा बाधिए।
एउटा सानो सुपारीको दानाले घरमा भित्रिन्छ सम्पति, बनाउँछ धनी आखिर कसरी ?